बाम एकता :ओली-दाहालको कुरा आज पनि निष्कर्षमा पुगेन » खबरहरुको एउटै केन्द्र
बाम एकता :ओली-दाहालको कुरा आज पनि निष्कर्षमा पुगेन
शुक्रबार, बैशाख ७, २०७५ १६:३५ मा प्रकाशित !
काठमाडौं। पार्टी एकताका विषयमा सहमति जुटाउन एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको छलफल आज पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन।
दुई नेताबीच पार्टी एकताकालागि गठिन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएपनि कुनै निष्कर्ष भने ननिस्कएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। दुई दलबीच कम्युनिष्ट पार्टीका स्थापना दिवसका दिन पार्टी एकीकरण गर्न कार्यदलले सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, बैशाख ९ मा एकीकरण नहुने भएपछि सकेसम्म यही महिनाभित्र एकीकरण गर्ने गरी ओली र दाहालबीच छलफल भएपनि सकारात्मक हुन सकेको छैन।
बिहीबार पनि दुई नेताबीच झण्डै तीन घण्टा लामो छलफल भएको थियो। दुई दलबीच जनयद्ध, एकीकृत पार्टीको चुनाव चिन्ह तथा एकीकरणमा भागवण्डाको विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। माओवादीले जनयुद्ध शब्दलाई स्वीकार गर्नुपर्ने, चुनाव चिन्ह सूर्य राख्न नहुने र एकीकरण गर्दा बराबरीको हैसीयत दिनुपर्ने अडान राखेको छ भने एमाले यी तीनवटै विषयसँग सहमत छैन।
दुई नेताबीच सौहार्दपूर्ण वातावरणमा वार्ता भएको दाहालको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ, तर वार्तामा के के विषयमा छलफल भयो भन्ने विषय खुलाएको छैन। कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि नै छलफल भएपनि सहमति भने हुन सकेको छैन।
एमालेले निर्वाचनको परिणाम अनुसार ६०÷४० को अनुपातमा भागवण्डा हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ भने माओवादीले भने बराबरीको आधारमा एकता हुनुपर्ने अडान राखेको छ। यदि दुई नेताबीच वार्ता सकारात्मक हुँदै गयो भने बैशाख ९ मै एकता हुन सक्ने नेताहरुले दाबी गर्दै आएका छन्।
PREVIOUS POST Previous post: राजपा पनि फुट्यो दुई तिर ,असन्तुष्ट समुहले खोल्यो नयाँ पार्टी,
NEXT POST Next post: आज कस्तो छ तपाइको भाग्य, हेर्नुहोस् राशिफल
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शुक्रबार, बैशाख ७, २०७५ १६:३५
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शुक्रबार, बैशाख ७, २०७५ १६:३५
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शुक्रबार, बैशाख ७, २०७५ १६:३५
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शुक्रबार, बैशाख ७, २०७५ १६:३५
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शुक्रबार, बैशाख ७, २०७५ १६:३५